In kasta oo ay jiraan xaaladaha cimilada ee xun, ayay Dawladda Hoose ee Magaalada Kayseri sii wadaysaa maalgelinteeda iyada oo aan hoos u dhicin. Dhismaha laanta afaraad waxay ku dartay isgoysyada badan ee dabaqa hore ee Isbitaalka Magaalada. Memduh Büyükkılıç ayaa booqday. [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu sii wadaa inuu si dhaw ula socdo Erciyes. Duqa magaalada Büyükkılıç wuxuu aadey usbuuc dhammaadka usbuuca wuxuuna la kulmay martida maxalliga ah iyo kuwa ajnabiga ah, Erciyes wuxuu ahaa usbuucaan mar labaad. madaxa [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Mamduux Büyükkılıç'ın, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkey kasta soo bandhigay xaflad in Gebze, Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale ka qeyb galay ka automakers guriga, ayuu yiri kuwa kibirsan. Madaxweynaha Büyükkılıç, sida Turkey ee awoodda badan [More ...]
Erciyes, oo ah midka ugu muhiimsan xarumaha barafka adduunka oo ay maal gashtaan Dawladda Hoose ee Magaalada Kayseri, ayaa wali martigelisa martida gudaha iyo shisheeyaha. Toddobaadkii hore, duullimaadyada jaartarka ee Poland waxay kor u dhaafeen shan iyadoo ay wehelinayaan Russia iyo Ukraine. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sii wadaysaa inay ku maal galiso gaadiidka si loo helo nabadgalyo taraafik ah. Macnaha guud, howlihii Gen. Hulusi Akar Boulevard 15kii Luulyo iyo Is-goysyada Wadooyinka Aşiyan ayaa la soo gabagabeeyey. Kayseri Weyn [More ...]
Isboortiga Inc. ee ka dhex jira Dowlada hoose ee Magaalooyinka Kayseri ayaa bilaabay tababarka barafka iyo barafka barafka iyadoo furitaanka xilli ciyaareedka cusub. Isboortiga Inc. ee ka dhex jira Dowlada hoose ee Magaalooyinka Kayseri ayaa bilaabay tababarka barafka iyo barafka barafka iyadoo furitaanka xilli ciyaareedka cusub. [More ...]
Shirka qorshaynta ayaa la qabtay iyada oo ay ka soo qaybgaleen dhammaan hay'adaha iyo hay'adaha ku habboon ee Erciyes, kuwaas oo noqday xarunta dalxiiska jiilaalka adduunka ee maalgashiga maalgashiga Degmooyinka Magaalooyinka Kayseri isla markaana furay xilli ciyaareedka cusub. Duqa Magaalada Caasimadda [More ...]
Erciyes, oo noqotay mid ka mid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka ee dunida ugu horeeya iyadoo maalgashi ku sameysay Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri; wuxuu sii wadaa martigelinta booqdayaasha gudaha iyo dibedda leh dariiqyo furan, adeeg fiican iyo dhadhan fiican. Duqa Magaalada Caasimadda [More ...]
Mountain Erciyes ugu Wanaagsan Dunida
Erciyes, oo ka mid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka ee ugu horreeya adduunka oo maalgashi ka sameeyay Degmooyinka Magaalooyinka Kayseri, ayaa ugu sarreeya tayadiisa. TSE-ISO 10002 iyo IQNet Shahaadada waxaa lasiiyay Erciyes markii ugu horeysay ee garoonada barafka caalamiga ah. Kayseri Weyn [More ...]